गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चासँगै हुर्किदै थियो यस्तो खतरनाक चिज ! जुन थाहा पाएपछि चिकित्सक नै भए बेहोस ! – Medianp
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २४, २०७५१४:४९0
एजेन्सी,२४ असोज । वेल्सकी एक युवती गर्भवती भएपछि उनको परिवार निकै खुसी थिए । यो उनीहरुको पहिलो सन्तान हुन लागेको थियो । क्रिस्टिको पेट जति बच्चा पेटमा रहँदा बढ्नु पर्ने थियो त्यो भन्दा बढी नै बढीरहेको थियो । यस्तो भएपछि उनीहरुले चिकित्सकलाई देखाउने सल्लाह गरे ।
जब उनको पेट चिकित्सकले चेक गरे तब थाहा भयो कि उनको गर्भ ६ हप्ताको मात्रै भएको थियो तर उनको पेटमा अर्को भयानक सिस्ट रहेको थियो । जसले गर्भाशयलाई समेत निकै असर पुर्याउँने अवस्थामा रहेको थियो । ६ महिनाको भएको गर्भ उनको देख्दा ८ महिनाको जस्तो देखिन्थ्यो । तर उनको पेटम बच्चा भन्दा अगाडी ३० सेन्टिमिटर लामो सिस्ट रहेको थियो ।
दिनदिनै बढ्दै गएको सिस्टको कारण तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्नु पर्ने चिकित्सकको सुझाव थियो । तर दुखद कुरा पहिलो सन्तान जन्मने आशमा खुसी भएका बाबू आमाको खुसी चाहि टुटेको थियो । तत्काल शल्यक्रिया गर्दा बच्चा नरहने चिकित्सकले बताएका थिए । उनीहरु बच्चा नरहेपनि महिलाको ज्यान बचेकोमा खुसी रहेका छन् । शल्यक्रिया मार्फत उनको पेटमा रहेको सिस्ट निकालिएको छ ।
यो देशमा छ होचापुड्का मात्र बस्ने एउटा अनौठो गाउँ